नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल यतिबेला युरोपका विभिन्न मुलुकमा नेपाली जनसम्पर्क समितिद्वारा आयोजना गरिएका कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छन् । पौडेलको सचिवालयका अनुसार २५ सेप्टेम्बरसम्म आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएर २६ सेप्टेम्बरमा उनी नेपाल फर्कने कार्यक्रम रहेको छ । यसबीचमा वरिष्ठ नेता पौडेल लग्जम्बर्ग, बेल्जियम, फ्रान्स, पोर्चुगल र स्विट्जरल्यान्डमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भइसकेका छन् भने जर्मनी र नेदरल्यान्ड्सको कार्यक्रममा सहभागी हुँदैछन् । यसका अतिरिक्त वरिष्ठ नेता पौडेल युरोपका पर्यटकीय स्थलहरूको घुमफिरमा समेत सहभागी हुनेछन् ।
युरोप भ्रमणमा रहेका नेता पौडेल जतिपनि कार्यक्रममा सहभागी भए, ती कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले नेतृत्वका कारण कांग्रेसले यो नियति भोग्नुपरेको बताए । त्यतिमात्र होइन, पार्टी विधान र प्रक्रियाअनुसार चल्न नसकेको गुनासो समेत पौडेलले गरेका छन् । पौडेलले आफूले कहिल्यै पनि पार्टीको शिर झुकाउने काम नगरेको दाबी समेत गरेका छन् । युरोप पुगेर पार्टीका विषयमा पौडेलले जुन किसिमको चिन्ता जाहेर गरेका छन्, त्यो एक हिसाबले सही नै छ । तर युरोप पुगेर पार्टी नेतृत्वले केही गर्न सकेन भनेर चोर औंला ठड्याउँदै गर्दा बूढी औंलाले वरिष्ठ नेता पौडेललाई पनि देखाइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पार्टी संगठन कमजोर हुनुमा पार्टी नेतृत्व मात्र दोषी छ भनेर औंला ठड्याउनुको कुनै औचित्य देखिँदैन ।
नेपाली कांग्रेस पार्टीको विगतलाई फर्केर हेर्ने हो भने पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरू दोस्रो कालखण्डका नेताहरू हुन् । कालक्रममा पार्टी हाँक्ने दायित्व देउवा र पौडेलको काँधमा आइपुगेको छ । सोहीअनुरूप अघिल्लो महाधिवेशनमा देउवा र पौडेल सभापतिका लागि भिडेका थिए । तर देउवाले बाजी मार्न पुगे । सभापतिमा देउवाले बाजी मारेपनि सोचेअनुरूप पार्टी हाँक्न नसकिरहेको आरोप देउवामाथि लाग्दै आइरहेको अवस्था छ । यहीबीचमा पार्टीभित्र आगामी महाधिवेशनको दौड समेत शुरू हुन थालेको छ । यो दौडमा वर्तमान सभापति देउवासहित वरिष्ठ नेता पौडेल, कोइराला परिवारका सदस्यहरू डा. शशांक कोइराला, डा. शेखर कोइराला र सुजाता कोइराला, पार्टीका पूर्व महामन्त्रीद्वय कृष्ण सिटौला र प्रकाशमान सिंहले समेत सभापतिमा दाबेदारी गरेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा वरिष्ठ नेता पौडेलको सभापति बन्ने सपना कसरी पूरा होला ? त्यो निकै सोचनीय विषय बन्न पुगेको छ ।
युरोपका सुकिलामुकिला कार्यकर्ताको सहयोगले मात्र उनी कांग्रेसको सभापति बन्न निकै कठिन छ । साँच्चिनै सभापति बन्ने हो भने देशका सतहत्तरै जिल्ला घुमेर कांग्रेसका लागि भनेर प्राण हत्केलामा राख्ने कार्यकर्तालाई भेट्नुपर्दछ ।
वरिष्ठ नेता पौडेल आगामी महाधिवेशनमा पनि सभापतिको उम्मेदवार बन्ने निश्चित छ । शायद त्यही उम्मेदवारीलाई हरहिसाबले बलियो बनाउनका लागि वरिष्ठ नेता पौडेल युरोप यात्रामा निस्किएको हुनुपर्छ । तर पौडेलले सोच्नुपर्ने विषय के छ भने युरोपका सुकिलामुकिला कार्यकर्ताको सहयोगले मात्र उनी कांग्रेसको सभापति बन्न निकै कठिन छ । साँच्चिनै सभापति बन्ने हो भने देशका सतहत्तरै जिल्ला घुमेर कांग्रेसका लागि भनेर प्राण हत्केलामा राख्ने कार्यकर्तालाई भेट्नुपर्दछ । उनीहरूले भोगेका पीडा र व्यथाहरूलाई मलम लगाउन सक्नुपर्दछ । तबमात्र पौडेलप्रति कार्यकर्ताको सहानुभूति रहनेछ । र आगामी महाधिवेशनमा सभापति बन्नका लागि पौडेलका लागि मार्ग खुल्नेछ । जबसम्म त्यतातिर पौडेलको ध्यान पुग्दैन, तबसम्म सभापति पद पौडेलका लागि ‘आकाशको फल, आँखा तरी मर’ सरह हुने निश्चित छ ।
यतिखेर वरीयताका हिसाबमा वरिष्ठ नेता पौडेल पार्टीभित्र दोस्रो स्थानमा रहेका छन् । पार्टीभित्र हरेक निर्णय हुँदा वरिष्ठ नेता पौडेलको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । निर्वाचनमा टिकट वितरणमा होस् या पार्टीभित्र केन्द्रीय सदस्यको बाँडफाँड अनि भ्रातृसंस्थाहरूको कार्यसमिति गठन हुँदा होस्, उनको नाममा भागबण्डा हुने गरेको छ । त्यस्तै २०४६ सालको परिवर्तनपछि लामो समय पौडेल सत्तामा रहेर मन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीदेखि सभामुखसम्मको अवसर पाइसकेको अवस्था छ । प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति भने उनकै क्षमताले हुन नसकेको विषय हो । तैपनि आफूले केही नपाएको गुनासो पौडेल गर्ने गर्दछन् । यसरी गुनासो गर्नु कहाँसम्मको न्यायसंगत विषय हो, त्यो त पार्टीभित्र मूल्याङ्कन हुने विषय हो ।
पौडेल अन्तरघातका कारण चुनाव हारेको भन्दै दोष थोपर्नमा नै व्यस्त छन् । यो उनको राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा ठूलो भूल हो ।
पौडेल कांग्रेसभित्र आजका मितिसम्म कुनै दाग नलागेका नेता हुन् । तैपनि कार्यकर्ताको भावनाअनुरूप चल्न नसक्दा पछिल्लो समयमा उनको व्यक्तिगत जीवन र कांग्रेस पार्टीले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा अघिल्लो वर्ष भएको संसदीय निर्वाचनलाई लिन सकिन्छ । निर्वाचनमा गृहजिल्लामा पौडेल आफू त पराजित भए भए, जिल्लाका ६ वटै सीट कांग्रेसले गुमाउन पुग्यो । वरिष्ठ पौडेल समानुपातिकमा बसेर देश दौडाहामा निस्किएको भए के कांग्रेसको हविगत यो हुने थियो त ? कदापि हुने थिएन । तर पनि पौडेल अन्तरघातका कारण चुनाव हारेको भन्दै दोष थोपर्नमा नै व्यस्त छन् । यो वरिष्ठ नेता पौडेलको राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा ठूलो भूल हो ।
युरोप भ्रमणपछि पनि वरिष्ठ नेता पौडेलको सोचमा कुनै परिवर्तन हुन्छ कि हुन्न ? त्यो त समयले नै बताउनेछ ।